भर्खरै को,रो,ना बारे ड,रलाग्दो भिडियो आयो हाम्रो सरखार कहाँ छ सक्दो सेयर गर्नुहोला है. - NaulooDhun
भर्खरै को,रो,ना बारे ड,रलाग्दो भिडियो आयो हाम्रो सरखार कहाँ छ सक्दो सेयर गर्नुहोला है.
May 15, 2021 adminLeaveaComment on भर्खरै को,रो,ना बारे ड,रलाग्दो भिडियो आयो हाम्रो सरखार कहाँ छ सक्दो सेयर गर्नुहोला है.
अस्पतालको मु र्दाघ रमा ला श राखिन्छन् । तर, नका भोकाहरुले यो ठाउँलाई पनि शरीरको भोक बनाउने अड्डा बनाए । पछिल्लो समय अस्पतालको मु र्दाघरमा भेटिएका जोडीहरुको तस्वीर बाहिरिएको छ । भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौरमा महाहराजा यशवंतराज अस्पतालका केही फोटो बाहिरिएका छन् । फोटोमा केही युवा र युवतीहरु आधा अधुरा कपडामा देखिएका छन् । यो दृश्य अस्पतालको मु र्दाघरको भएको बताइएको छ ।
यो मु र्दाघरको ठेक्का एक निजी अस्पताललाई दिइएको छ । फोटो सार्वजनिक गर्नेहरुका अनुसार यो कम्पनीका कर्मचारीले नै बिगत ४ दिनदेखि यहाँ युवतहिरु लिएर आइरहेका छन् ।
अस्पतालका कर्मचारीलाई यसको जानकारी दिइएको थियो तर अस्पताल व्यवस्थापन अन्जान छ । केही समयअघि यो मु र्दाघरमा एक वृद्धको शव १५८ दिनसम्म त्यत्तिकै रहेको थियो । त्यसपछि यसको रेखदेखको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
मंगलबार राती केही व्यक्तिहरु ला श लिएर मु र्दाघर पुग्दा कोठामा युवतीहरु देखेर चकित परे । उनीहरुसँग केही युवकहरु पनि थिए । उनीहरुसँग सोध्दा उनीहरुले कडा रुपमा आफ्नो ला श राखेर जाउ भनेका थिए । त्यसपछि श व लिएर आएकाहरुले त्यहाँका केही फोटो खिचे । यो देखेपछि भने मु र्दाघरका कर्मचारी युवतीहरुलाई लिएर बाहिर आए ।
फोटो सार्वजनिक भएपछि फोटोमा देखिएका २ कर्मचारीमाथि का रवाही गरिएको छ । अस्पतालका अधीक्षक पीएस ठाकुरका अनुसार दुई कर्मचारीलाई ब र्खास्त गरिएको छ र कम्पनीलाई नोटिस पठाइएको छ ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
बोल्दा-बोल्दै भावुक भएकाअपिल भन्छन “मलाइ पहिलोपटक टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाउने उहा नै हुनुहुन्थ्यो । ”
आमाको मुख हेर्ने दिन- काठमाडौंको कोठामा २ दिनदेखि भोकभोकै ३ बर्षे छोरी र आमाको रुवाबासी । शिशिर पुगे।
तुरन्तै हेर्नु जनताले चाए भने जे पनी हुन्छ पुरै जनता आक्रोश भए
OMG भर्खरै अस्पतालमा के भयो छिटो हेर्नु सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला